Mazunte , Oaxaca, i-Mexico
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-La Secreta Caprichosa Casa Petit Ho
U-La Secreta Caprichosa Casa Petit Ho Ungumbungazi ovelele
I-La Barca de Viento iyigumbi elibanzi kakhulu elinombhede osayizi wenkosi kanye nendawo ephakeme ephindwe kabili ongayibona ezithombeni. Kukhona isundu ngaphakathi nasendlini yakho yokugezela yangasese ishawa izalwa esiqwini somuthi. Iyathandeka futhi ibekwe phakathi kwezimila eziluhlaza. Ikhishi lihlome kahle. Kukhona i-fan ne-hammock. Ngenkathi yemvula, amanzi angangena ngeziqu zomuthi wesundu ekhishini, futhi eduze nendawo yokugezela.
I-La Secreta, eyakhiwe ngezikhala ezizimele eziyisi-6, ayinayo indawo yokwamukela abantu, kodwa inabasebenzi abazokwamukela, esikucela ukuba usitshele isikhathi sokufika kwakho. Sisebangeni lika-8 ekuseni kuya ku-5 ntambama ukuze sihlanze indawo futhi sinake izidingo zakho.
Asinacala nganoma iyiphi ingozi izivakashi eziba nazo emagcekeni.
Uma kwenzeka noma yimuphi umcimbi ongalindelekile, ungekho endlini, sishayele ngocingo.
Vala njalo iminyango yokungena, ngaphandle kwalokho, uzoba nesibopho sokungena kwabantu ongabazi ezikhungweni zeLa Secreta.
Uma uza ngemoto, kufanele usazise, njengoba kunezindawo zokupaka ezi-2 kuphela. Uma kunabantu, umakhelwane uqasha indawo ngentengo ephansi yama-pesos angama-50 ngosuku.
Uma kunesimo esiphuthumayo sezempilo, kunodokotela abagunyaziwe eMazunte. Nakekela okhiye bakho ukuze bangalahleki lapho singekho! Nakekela amanzi kakhulu, ungawaphonsi amaphepha endlini yangasese futhi unakekele amanzi kakhulu. Asinawo amanzi ashisayo ngoba maningi amanzi esifundeni, uma siwadinga sinomshini wokuwafudumeza ebhakedeni. Khumbula ukucisha ifeni nezibani njalo lapho uphuma! Phatha ifoni yakho njengesibani.
4.79 ·75 okushiwo abanye
4.79 · 75 okushiwo abanye
ILa Secreta iseCallejón Armadillo imizuzu emihlanu ukusuka ogwini, kanye nomgwaqo omkhulu. E-Andador Rinconcito kunezitolo eziningi, amabhikawozi, amathilomu nezindawo zokudlela.
EMazunte kunama-ATM, kodwa awahlali enemali noma kungenzeka angasebenzi, ngakho sincoma ukuthi ukhiphe imali ezikhumulweni zezindiza noma uma uza ngomgwaqo usuka e-Oaxaca, ePochutla.
Sinendawo yokupaka kuphela, uma isivele igcwele, ungaqasha eyodwa endaweni engumakhelwane ngama-peso angu-50 ngosuku.
I-wi-fi yinhle kakhulu, futhi ihluleka kuphela lapho isistimu evamile esifundeni yehla.
Kumele kuthuleke kusukela ngo-9:30 ebusuku, ngo-10 akumele kubekhona umsindo. Ngesikhathi se-Covid, izimemo ezivela kubantu bangaphandle azamukelwa, ezikhungweni zeLa Secreta.
Sisuka ngo 8-9 am to 5pm sinake, from 5pm akekho nomphathi kulendawo, uma ulahlekelwa okhiye noma ubashiya ngaphakathi, sisenkingeni. Noma kunjalo, ungasithinta ngohlelo lokusebenza lwe-Whats ngo-90%.
Ibungazwe ngu-La Secreta Caprichosa Casa Petit Ho
I-La Secreta, eyakhiwe ngezikhala ezizimele eziyisi-6, ayinayo indawo yokwamukela abantu, kodwa inabasebenzi abazokwamukela, esikucela ukuba usitshele isikhathi sokufika kwakho. Si…
ULa Secreta Caprichosa Casa Petit Ho Ungumbungazi ovelele